Fahasamihafana eo amin'ny Anaerobe tsy maintsy hampiasaina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Anaerobe tsy maintsy hampiasaina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Biolojia / Mikrobiolojia / Fahasamihafana eo amin'i Anaerobe manana andraikitra sy manan-tsaina
Fahasamihafana eo amin'i Anaerobe manana andraikitra sy manan-tsaina
9 Febroary 2018 Narotsak'i Samanthi
Fahasamihafana lehibe - Mandoa vola vs Facultative Anaerobe
Ny oksizenina molekiola dia tsy nisy nandritra ny fiandohan'ny tantaran'ny Tany. Indray mandeha, ny cyanobacteria dia nanomboka nanjary photosynthesize , ny oxygen oxygen dia navotsotra tao amin'ny atmosfera. Avy eo dia nanomboka nifamaly tamin'ny fomba hafa ireo zavamiaina tamin'ny tontolo oksi okika. Ny zavamiaina bitika dia mampiseho fahasamihafana lehibe satria misy izy ireo na aiza na aiza. Hafa ny fihetsik'izy ireo amin'ny oksizenina molekiola. Miorina amin'ny takiana oxygen, ny zavamiaina dia voasokajy ho vondrona samihafa toy ny aerobes obligate, anaerobes obligate, anaerobes facultative, microaerophiles ary aerotolerants. Ny anaerobe Obligate dia zavamananaina matin'ny oksizenina. Ny anaerobe mahaliana dia zavamananaina iray izay afaka miaina ny toeran-oxygen sy ny toeran-tsy misy. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny anaerobe obligate sy facultative dia ny obliger anaerobe dia tsy afaka miaina amin'ny fisian'ny oxygen raha ny anaerobe facultative kosa dia afaka mivelona amin'ny fisian'ny oxygen.
2. Inona no atao hoe Anaerobe tsy maintsy atao
3. Inona no atao hoe Anaerobe Facultative
4. Ny fitoviana eo anelanelan'ny Anaerobe voatery
5. Fampitahana mifanila - Mandoa vola vs Facultative Anaerobe amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Anaerobe tsy maintsy atao?
Ny teny hoe "Mankatoavina" dia manondro ny hentitra na tsy maintsy. Ny anaerobe Obligate dia zavamananaina mila tontolo iainana tsy misy oksizena henjana. Raha misy oksizenina, anaerobes voatery dia novonoina noho ny fanapoizinana avy amin'ny oxygen. Izy ireo dia tsy ampy amin'ny anzima toy ny superoxide dismutase sy catalase izay ilaina hanovana ny superoxide mahafaty namorona noho ny fisian'ny oxygen. Raha misy oxygen, dia mijanona ny asan'ny anaerobes voatery rehetra. Ireo zavamiaina ireo dia tsy mitaky oksizenina raha miaina. Fa kosa, asehon'izy ireo ny fifohana rivotra anaerobika na fanamasinana ho an'ny famokarana angovo. Ny anaerobes voatery dia mampiasa karazana molekiola isan-karazany toy ny sulfate, nitrate, iron, manganese, mercury, na carbon monoxide ho mpandray elektronika ho an'ny rivotra. Ohatra amin'ny bakteria anaerobika voatery: Actinomyces , Bacteroides, Clostridium spp, Fusobacterium spp, Porphyromonas spp, Prevotella spp, Propionibacterium spp, ary Veillonella spp.
Sary 01: Andramo Anaerobe
Ireo zavamananaina ireo dia tsy miaina afa-tsy amin'ny tontolo anaerobika toy ny tany mangitsokitsoka lalina, rano mbola mangatsiaka, any ambanin'ny ranomasina lalina, ny lalan-tsinay biby, loharano mafana sns. Mila fitaovana manokana hianarana izy ireo. Ny siny anaerobika dia iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa indrindra amin'ny fandinihana anaerobe voatery. Ity fitaovana ity dia manala ny oxygen amin'ny tontolo anatiny ary mameno azy amin'ny gazy karbonika.
Inona ny atao hoe Anaerobe Facultative?
Anerobe Facultative dia zavamananaina iray izay afaka mampisy angovo amin'ny alàlan'ny fisefoana aerobika raha eo ny oksizenina ary mifamadika amin'ny fisefoana anaerobika na fanamasinana hamokarana angovo rehefa tsy eo ny oxygen. Tsy voatery mila oksizenina ny anaerobes mana-pahaizana satria miaina.
Sary 02: Anaerobic E. coli Facultative
Ny bakteria sasany an'ny anaerobes fakultative dia Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli , Salmonella , Listeria , Corynebacterium ary Shewanella oneidensis . Ny holatra sasany toy ny masirasira sns dia koa anaerobes fakan-tahaka.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Anaerobe voatery?
Ireo sokajy roa ireo dia voafaritra mifototra amin'ny filan'ny oxygen.
Ireo vondrona roa ireo dia afaka miaina anaty tontolo tsy misy oksizenina.
Misy bakteria anaerobika voatery sy mahomby.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Anaerobe voatery?
Obligate vs Facultative Anaerobe
Ny anaerobe Obligate dia zavamananaina iray miaina anaty tontolo anaerobika amin'ny tsy fisian'ny oksizena tanteraka. Ny anaerobe mahaliana dia zavamananaina afaka mitombo sy miaina amin'ny tontolo aerobika sy anaerobika.
Ny anaerobe voatery dia novonoina noho ny fisian'ny oxygen. Ny anaerobe mahaliana dia tsy novonoina tamin'ny fisian'ny oxygen.
Ny anaerobe voatery dia mampiseho ny fifohana rivotra anaerobika na fanamasinana. Ny anaerobe mahaliana dia mampiseho ny fisefoana aerobika, ny fifohana rivotra anaerobika ary ny fanamasinana.
Ao amin'ny Tube Tube
Manankery anaerobe mivory eo amin'ny farany fantsom-kolotsaina. Anerobe mpikaroka no manangona betsaka indrindra eo an-tampon'ny fantsom-kolotsaina ary miparitaka eraky ny sehatry ny kolontsaina ihany koa.
Ohatra sasany amin'ny anaerobes voatery: Actinomyces , Bacteroides , Clostridium,
Porphyromonas , Pre v otella , Propionibacterium, ary Veillonella.
Ohatra sasantsasany ho an'ny anaerobes fahaiza-manao dia ny Staphylococcus spp, Streptococcus spp,
Escherichia coli , Salmonella , Listeria ,
Corynebacterium sy Shewanella oneidensis .
Famintinana - Obligate vs Anaerobe Facultative
Ny anaerobe tsy maintsy atao sy ny anaerobe fampiasa dia karazan-javamanana roa voasokajy mifototra amin'ny fitakiana oxygen amin'ny fitomboana. Miteraha anaerobe miaina amin'ny tsy fisian'ny oksizenina tanteraka. Ny oxygen oxygen dia poizina hamoahana anaerobes satria ny asany metabolika rehetra dia mijanona amin'ny fisian'ny oxygen. Izy ireo dia mampiseho ny famoahana rivotra anaerobika amin'ny famokarana angovo. Anerobe manam-pahaizana dia zavamananaina afaka miaina sy maniry eo amin'ny fisian'ny na tsy fisian'ny oksizenina molekiola. Rehefa misy ny oxygen, ny anaerobes fakultative dia mampiseho ny fisefoana aerobic raha afaka mivadika ho fermentation na respiration anaerobic izy ireo rehefa tsy eo ny oxygen. Io no mahasamihafa ny anaerobe obligate sy facultative.
Sintomy ny PDF an'ny Obligate vs Facultative Anaerobe
Azonao atao ny misintona ny kinova PDF an'ity lahatsoratra ity ary ampiasao izany ho an'ny tanjona ivelan'ny Internet toy ny isaky ny naoty. Azafady mba ampidino eto ny kinova PDF: Fahasamihafana eo amin'i Anaerobe manana andraikitra sy ny Facultative
1.OpenStax. "Fepetra ilaina amin'ny oksizenina amin'ny fitomboan'ny mikraoba." Fangatahana oksizenina amin'ny fitomboan'ny mikraoba | Microbiology. Hita eto
2. "Andramo anerobe." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 14 jan 2018. Hita eto
1.'Clostridium botulinum 01'Ny ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana ny aretina amin'ny tranombokim-pahasalamana ho an'ny daholobe (PHIL), (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2.'E. coli Bacteria (16578744517) 'By NIAID - E. coli Bacteria, (CC BY 2.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Ascus sy Basidium Fahasamihafana eo amin'ny Nutrient Agar sy ny Nutrient Broth Fahasamihafana eo amin'ny haino aman-jery matanjaka sy ranoka Fahasamihafana eo amin'ny Nitrification sy Denitrification Fahasamihafana eo amin'ny Endotoxin sy Enterotoxin
Filed Under: Microbiology Tagged With: Compare Anaerobe Obligate and Facultative , Facultative Anaerobe , Facultative Anaerobe Definition , Facultative Anaerobe ohatra , Facultative Anaerobe Oxygen , Facultative Anaerobe Respiration , Obligate Anaerobe , Obligate Anaerobe Definition , Obligate Anaerobe ohatra , Obligate Obstation Anaerobe , Fahasamihafana Anaerobe amin'ny fividianana andraikitra sy fikajiana, Fomba fitoviana Anaerobe tsy maintsy hananana andraikitra sy fampiasa an- tsary
Fahasamihafana eo amin'ny Utility Cardinal sy Ordinal
Fahasamihafana eo amin'ny Lysosome sy Ribosome
Fahasamihafana eo amin'ny Endocarditis sy Pericarditis
Fahasamihafana eo amin'ny mpanampy ny mpanambady sy ny mpanambady